Mallas Zeenaawwii Abbaa Irree dha! – OROMOCENTRE
You are here: Home / Uncategorized / Mallas Zeenaawwii Abbaa Irree dha!
Mallas Zeenaawwii Abbaa Irree dha!
May 20, 2012 by Oromo Community in Melbourne 1 Comment
(Oromocentre, Melbourne, Caamsaa 20, 2012) Mootumman Itoophiyaa mootummaa nagaa fi tasgabbii fiduu dadhabe waan ta’eef deeggarsi kennamuuf irraa dhaabbachuu akka qabu Waldaan Hawaasa Oromoo Melboune Kibba Bahaa gaafate.
Waldaan kun xalayaa Iyyaannoo Caamsaa 15, bara 2012 Hayyuduree mootummoota gamtoomanii Baankii Moonii fi mootumma Ameerikaa, fi jaarmiyoota mirga dhala namoomaaf falmaniif erge keessatti akka hubachiisetti, mootummaan Mallasa Zeenaawwii ummata baroota hedduuf nagaa fi jaalalaan waliin jiraataa jiru walitti diruun akka biyyi yaaddoo fi sodaa keessa galu godhaa jira.
Walgahii dureesota Saddetii irratti afeeramee kan argame Mallas Zeenaawwii otuu dhimma wabii nayaataa himaa jiruu mormiin isa mudateen salphate.
Sagantaa dhimma wabii nyaataa qophaa’ee jiru irratti oduu gabaasuuf kan hirmaate Abbaba Galaaw otuu Mallas dubbachaa jiruu ka’ee sagalee isaa ol fuudhuun “Malla Abbaa Irree ti! Mallas Sanyii dhala namaa irratti yakka hojjataa jira!” jechuun qalbii hirmaattotaa hawwate.
Yeroo kanatti waan ta’en kan rifate Mallas, rifannaa isaa dhofkachuuf sagalee isaa olkaasee dubbachuuf yaalii godhus, sagaleen Gaazexeessaa Abbabaw Galaaw caalchisuu waan hin dandeenyeef dubbii isaa addaan kutee, boquu isaa cabsee usuuf dirqameera.
Haga humnooti tikaa gaazexeessicha qabanii baasanitti, sagalee isaa olkaasee gochaa hammeenyaa mootumma Mallas Zeenaawwiin raawwatamaa jiru kan tarreesse Abbabaa Galaaw, erga qabamee bahee booda eenyummaa isaa gaafachuun ala miidhaan irra gahe akka hin turre TV Isaat jedhamu irratti ibsee jira.
Namni waardiyaa Mallas ta’e tokko garuu akka isatti dhaadate dubbatee jira.
Kana malees, hawaasti Ameerikaa keessa jiru mormii fi balaaleffannaa guddaa Mallas irratti bahee akka jiru odeessi achi irraa nu gahe hubachiisee jira.
OROMO CONTINUE TO FLEE VIOLENCE »
Kuusaa namarraa says:
wayyaneen oromiyaa keessaa yeroo gabaabaa keessatti bahuu baannaan nuti ejjennoo fudhannu qabna jechaa jiru uummanni qellam wallaggaa